Unephutha impilo yakho yonke - BGR - T mov RELAY
Accueil » ISAYENSI »Uphambene impilo yakho yonke - BGR
Noma ngabe ungumgijimeli wemashi onolwazi, i-jogger yama-amateur, noma nje ugijime lapho isimo sikuvumela, ucwaningo olusha luthi uzozenzela umathanda ngokuhlanganisa izinyawo zakho ngaphambi kwe-spinint elandelayo. Leli iqhinga elibonakala lingelakho livela esihlokweni esishicilelwe ku Ijenali ye-Biology Yokuhlola futhi unesisindo esikhulu sesayensi ngemuva kwakhe.
Ukugijima, chaza abaphenyi, kuwumkhuba ongasebenzi kahle kubantu. Ishisa ama-kilojoule amaningi, kepha yingxenye encane yamakhalori eshisiwe empeleni esebenza ukugcina imilenze yakho ihamba, ngenkathi amanye amandla akho esetshenziselwa izinto zemvelo ezinjengokusekela isisindo sakho. Kodwa-ke, ngokwandisa ukusebenza kahle kwemilenze yakho ngokuswayipha, ungavuselela ukunyakaza okugcwele.
Kulolu cwaningo, abacwaningi bazame ngomqondo osuvele utholakala emvelweni. Njengoba idokhumenti ichaza, "izicubu zasentwasahlobo" zivumela ezinye izilwane, kufaka phakathi abantu, ukuthi zigungqe imilenze yazo njengoba zigijima. Ukuqinisa lo mphumela, ososayensi bakha i- "exotendon" okuthi uma ifakwe phakathi kwezinyawo, ivumele ukugijima ngamandla amancane.
"Empeleni yehlisa umzamo ka-Elliot Hawkes wokubuyela emuva ngesikhathi sokuma. - Umbhali walolu cwaningo, kusho isitatimende. "Vele, abantu bagijima kwi90 hhayi yonke iminithi. Uma ungathatha izilinganiso ezimfushane futhi ngokushesha, bekuzonciphisa amandla adingekayo ukuze ushaye emuva, kepha kudinga amandla amaningi okujaha imilenze yakho ngokushesha okukhulu, ukuze ungakwenzi ngokwemvelo. Kodwa-ke, iqembu lisusa le ndleko yokujikisa imilenze, okusho ukuthi ungenza kalula i-100 isinyathelo ngesinyathelo, okunciphisa amandla adingekayo ukugoba. "
Abaphenyi bathi ngesikhathi sokuhlolwa, abagijimi baba ntofontofo ngezibopho ezibopha izinyawo zabo ngokushesha. , futhi le esele ayithintekanga. Lapho iqembu lisuswa, abagibeli babuyela ijubane labo elijwayelekile ngaphandle kwenkinga.
Sekukonke, ngenkathi kulandelwa ukusetshenziswa kwemali, ithimba lathi kunciphisa amandla adingekayo ekusebenzeni i-6,4% ngokwesilinganiso. Le nombolo, noma incane, ibizophawuleka ngokumangazayo kubagijimi abahamba ibanga elide.
Umthombo wesithombe: Cultura / Shutterstock
I-Algeria: phakathi komgwaqo namandla, inkinga yamaSulumane - JeuneAfrique.com
ETunisia: USkila ukhomba imakethe yamazwe omhlaba ngezikhafu zayo zesilika "100% ezenziwe ngesandla" - JeuneAfrique.com
I-DRC-Ibhola: ukuvuza okungaqondakali kukaMeschak Elia, umdlali othembisayo weTP Mazembe - JeuneAfrique.com
Lona wesifazane utshela ukuthi usebenzisa kanjani i-Instagram ukuheha amadoda - ISANTE PLUS MAG
U-Laura Smet eminyakeni ye-36: emuva ezenzakalweni ezaphawula unyaka wakhe
ABANTU & LIFESTYLE7,516